Doorashada USA: Natiijada Codbixinta Gobalka New Hampshire ee is-reeb-reebka Murashaxiinta [Daawo] - iftineducation.com
Doorashada USA: Natiijada Codbixinta Gobalka New Hampshire ee is-reeb-reebka Murashaxiinta [Daawo]
iftineducation.com – Waxaa Salaasadii shalay gobalka New Hampshire ee dalka Maraykanka ka dhacday codbixinta horudhaca ah ee lagu soo xulayo murashaxiinta Xisbiyada Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga.
Todobaadkii hore ayey codbixintii ugu horeysay ee horudhaca ah ka dhacday gobalka IOWA halkaasi oo ay dhanka Xisbiga Dimuquraadiga tiro is la eg ay keeneen labada murashax Senator Bernie Sanders iyo Hillary Clinton.
Dhinaca Jamhuuriga ayaa waxaa gobalkii IOWA kusoo guuleystay Senator Ted Cruz, halka 2aad iyo 3aad ay galeen Donald Trump iyo Marco Rubio.
Codbixinta gobalka New Hampshire ayaa si weyn uga duwan tii IOWA, iyadoo codbixinta si weyn ugu guuleystay Murashaxa dhanka Dimuquraadiga Senator Bernie Sanders oo markii ugu horeysay guul ka gaaray Hillary Clinton oo iyadu taageero badan ka helaysa ganacsatada waaweyn ee dalkaasi.
In ka badan 90% cododka tageerayaasha oo hada la tiriyey ayey natiijadu tahay:
Bernie Sanders ayaa helay codod gaaraya: 60%, halka Hillary Clinton ay heshay cododka dhan: 39%
Tartanka dhanka xisbiga Jamhuuriga oo ay weli ku tartamayaan murashaxiin badan ayaa waxaa isaguna cododka ugu badan helay Donald Trump oo helay 35% cododka, waxaana kaalimaha 2aad & 3aad kala galay Murashaxiinta John Kasich oo helay 16% iyo Ted Cruz oo helay 11%, cododka inta kale ayey heleen murashaxiinta kale ee Jamhuuriga.
Is reeb reebka murashaxiinta ee ka bilaabatay gobalada wadanka Maraykanka ayaa ah kuwo horudhac u ah doorashada guud ee dhici doonta bisha November.
Waxaana lagu eegayaa taageerayaasha ay heystaan murashaxiinta kala duwan si markaasi ugu danbeyn ay labo murashax isugu soo haraan tartanka Madaxweynaha kuwaasi oo ka kala imaanaya dhanka xisbiga Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga.
Xeer Ilaaliyaha Guud oo sheegay in Kenya isku dayday inay hor-istaagto dacwada ay ka gudbiyeen